ZTE आइसबर्ग को डिजाइन पर्दा मा एक डबल पायदान देखाउँदछ | ग्याजेट समाचार
ईडर एस्टेबान | | मोबाईलहरू, हाम्रो बारेमा
एन्ड्रोइड मा निच धेरै फैशनेबल छ। महिनौं सम्म हामीले देख्यौं कि कति ब्रांडले उनीहरूको स्क्रीनमा निशानमा शर्त लगाउँछन्। यद्यपि यो सबै प्रयोगकर्ताहरू लाईक गर्ने अन्त हुँदैन। तर ब्रान्डले यसलाई प्रयोग गरिरहन्छ। अब ZTE यसको ZTE आइसबर्गमा सम्मिलित हुने अन्तिम हो। जे होस् उनीहरूले यो केहि खास तरिकामा गर्छन्। किनभने तिनीहरू डबल निशानमा शर्त लगाउँछन्।
ZTE आइसबर्ग को डिजाइन यसको प्रोटोटाइप को लागी धन्यवाद प्रकट भइसक्यो। यी छविहरूमा हामी देख्न सक्छौं कि ब्रान्ड आश्चर्यचकित हुन्छ र स्क्रिनमा डबल खाचको लागि अप्ट हुन्छ। दुबै शीर्ष र यसको तल। निशानको फेसनलाई नयाँ चरममा पुर्‍याउँदै।
साथै, यो ध्यान दिनुहोस् कि यो एक धेरै ठूलो खाच हो। अन्य एन्ड्रोइड मोडेलमा हामीले एउटा सानो र केही बढी विचारशील पायदान देख्यौं। तर यस अवस्थामा डबल हुनुको साथसाथै यो पनि ठुलो छ। त्यसोभए निश्चित त्यहाँ त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जो डिजाइनसँग खुशी छैनन्।
यो ZTE आइसबर्गको मात्र आश्चर्यजनक पक्ष होइन। फोन, जसमा गिलासको शरीर छ, यसको कुनामा ध्यान आकर्षण गर्दछ। हामी देख्न सक्छौं कि उपकरणको कुनाहरू आफैं गोल छ। तर, गिलास जसले यसलाई सुरक्षा गर्दछ अब लामो छ, त्यसैले यो बाहिर खडा.
यसले केही हदसम्म अजीब प्रभाव सिर्जना गर्दछ। तर भावनाको साथसाथै ZTE आइसबर्ग प्रयोग गर्दा हात समाउन सबैभन्दा सहज फोन हुनेछैन। कुनै श doubt्का बिना, कम्पनी को पक्ष मा एक धेरै विशेष निर्णय। यदि हामी डिजाइनमा ध्यान केन्द्रित गर्दैनौं भने हामी यो देख्न सक्छौं त्यहाँ पछाडि डबल क्यामेरा र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ.
यो पनि टिप्पणी गरिएको छ कि यो ZTE आइसबर्ग वायरलेस चार्जिंग र अनुहार पहिचान हुनेछ। यस समयमा यसका विमोचन मिति बारे केही थाहा छैन। यो यस बर्षको अन्त्यमा वा २०१ 2019 मा हुन सक्छ। तर हामीले यस बारे केही भन्नको लागि फर्मको लागि कुर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » ZTE आइसबर्ग स्क्रिनमा एक डबल खाच हुनेछ
तिनीहरूले VEVO को यूट्यूब खाता ह्याक गर्छन् र ईतिहासको सब भन्दा प्रजननका साथ भिडियो हटाउँछन्: डेस्पासिटो